PSF ဖိုင်မှတ်တမ်း (ဒါဟာတစျခုကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်လို & Is အဘယျသို့)
PSF ဖိုင်များ, ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်ကိုဖွင့်, & ပြောင်းလုပ်နည်း
တစ်ဦးက ဖိုင် ဟာ PSF နှင့်အတူ ဖိုင် extension အများဆုံးဖွယ်ရှိတစ်ဦးကို Adobe Photoshop ကိုသက်သေပြချက်က Settings ဖိုင်ဖြစ်ပါသည်။ သင်က print ထုတ်မီ image ကိုကြည့်ရှုမည်ကိုမည်သို့တွေ့နိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်ဖိုင်တွေဤမျိုးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အရောင်ဦးစားပေးသိမ်းဆည်းထား။
တစ်ဦးက PhotoStudio ဖိုင်ကိုလည်း .PSF ဖိုင် extension အသုံးပြုထားတဲ့ image ကို format နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤဖိုင်များကိုစာသား, အလွှာများနှင့်ပုံစံမျိုးစုံဆံ့နိုငျသညျ။
အခြားပရိုဂရမ်တစ်ခု GPS စနစ်ဘီဘာအိုပံ့ပိုးမှုဖိုင်အဖြစ်ကဲ့သို့လည်း AutoCAD Postscript ပုံစံများဖိုင်, အိတ်ဆောင်အသံဖိုင်က PID Script ဖိုင်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး HP က-UX ကိုကုန်ပစ္စည်း Specification ဖိုင် PSF ဖိုင် format ကိုသုံးနိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက်: PSF ကိုလည်းအချက်ပြန့်ပွားတဲ့ function နှင့်တိုးတက်သော segment ဘောင်တစ်ခုအတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်မဝေါဟာရကိုငါကဒီမှာအကြောင်းပြောဆိုဖိုင်ကိုပုံစံများနှင့်အတူလုပ်ဖို့ဘာမှရှိပါတယ်။
တစ်ဦး PSF ဖိုင်မှတ်တမ်းကိုဖွင့်ဖို့ကိုဘယ်လို
Adobe က Photoshop ကိုသက်သေပြချက်က Settings ဖိုင်များကိုကြည့်ရန်မှတဆင့်ကို Adobe Photoshop ကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ကြောင်း PSF ဖိုင်တွေ> သက်သေပြချက် Setup ကို> မိမိစိတ်ကြိုက် ... menu ကို option ကို။ ကိုယ့်ဝန်ထုပ်တွေကို select လုပ်ပါ ... အ PSF ဖိုင်ကိုတင်သွင်းဖို့ခလုတ်ကို။
အဆိုပါအခမဲ့ XnView အစီအစဉ်ကို ArcSoft ရဲ့ PhotoStudio နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော PSF ဖိုင်တွေဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ PhotoStudio အစီအစဉ်ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာသူတို့ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ပေမယ် (သင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်စမ်းနေတုန်းပဲရှိပါတယ်သော်လည်း) ကို software ကိုရပ်စဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထိပ်ဖျား: ဒီနည်းလမ်းကိုအများဆုံးအခြားဖိုင်အမျိုးအစားများကိုလျှောက်ထားပါဘူးသျောလညျး, သငျသညျအစားကိုယ့်ဖို့ PhotoStudio ဖိုင်ရဲ့ .PSF extension ကိုအမည်ပြောင်းနိုင်ပါတယ် .jpg , ပြီးတော့ Adobe Photoshop (နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသည်အခြားပုံရိပ်အယ်ဒီတာများ / ကြည့်ရှု) တွင်ဖွင့်ပါ။
ဤတွင် PSF ဖိုင်များကိုအသုံးပြုအခြားအစီအစဉ်များအပေါ်သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုဖွင့်:
ဂျီပီအက်စ်ဘီဘာအိုပံ့ပိုးမှုဖိုင်: agi ရဲ့ System Tools Kit (STK) သို့မဟုတ် LinQuest ရဲ့ GPS စနစ်နှောက်ယှက်ခြင်းနှင့် Navigation Tool ကို (ဧရာ)
AutoCAD Postscript ပုံစံများဖိုင်ကို: Autodesk ရဲ့ AutoCAD
အိတ်ဆောင်အသံဖိုင်: XMPlay သို့မဟုတ် Winamp (နှစ်ဦးစလုံးဟာ Highly စမ်းသပ် plugin ကိုလိုအပ်သည်) အဖြစ်အသံ Overload
PID Script ဖိုင်: Palmer ကစွမ်းဆောင်ရည်အင်ဂျင်နီယာရဲ့ PCMSCAN
HP က-UX ကိုကုန်ပစ္စည်း Specification ဖိုင်ကို: HP ရဲ့ Software များဖြန့်ဖြူးမှု (SD)
သင်သည်သင်၏ PC ကိုတခုတခုအပေါ်မှာပလီကေးရှင်း PSF file ကိုဖွင့်လှစ်ရန်ကြိုးစားပါဘူးဒါပေမယ့်မှား application ကိုဖွင့်ဒါမှမဟုတ်သင်မဟုတ်ဘဲအခြား installed Program ကိုဖွင့်လှစ် PSF ဖိုင်တွေရှိသည်မယ်လို့ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏မြင်သောတွေ့လျှင် တစ်ဦး Specific ဖိုင် extension များအတွက်ပုံမှန်အစီအစဉ်ကိုပြောင်းလဲနည်း အောင်များအတွက်လမ်းညွှန် Windows တွင်ကြောင်းပြောင်းလဲမှု။
တစ်ဦး PSF ဖိုင်မှတ်တမ်းပြောင်းလုပ်နည်း
သငျသညျအထကျကနေကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့, သင်တို့၏ PSF ဖိုင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရင်းအမြစ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါဟာသင်ကပြောင်းဖို့ဘယ်လိုနားလည်နိုင်ခင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ PSF file ကိုအသုံးပြုသည်အဘယ်အရာကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့အရေးကြီးတယ်။
တစ်ဦးကို Adobe သက်သေပြချက်က Settings ဖိုင်ဥပမာ, ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူးမျှမကအခြားအသုံးဝင်သောပုံစံသို့ကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးက PhotoStudio ဖိုင်သော်လည်း, JPG နှင့် XnView သုံးပြီးတခြားအလားတူပုံစံများပြောင်းလဲနိုင်ထားတဲ့ image file ကိုဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျအထကျစာရင်း PSF ဖိုင်တွေ၏အခြားအမျိုးအစားများများအတွက်တူညီသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်နာသင့်ပါတယ်။ သင်ကဖန်တီးပြီးတော့တခြား format နဲ့မှဖိုင်ကိုတင်ပို့သို့မဟုတ်ကယ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်သော program တစ်ခုအတွက် PSF file ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ပါ။
မှတ်ချက်: PSF လည်းဖိအားများနေတဲ့တိုင်းတာမှုအရာ, စတုရန်းပေနှုန်းပေါင်ကိုဆိုလိုတာပါ။ သငျသညျ KPA, ပ, Convert-me.com မှာ KN / မီတာ2နှင့်အခြားဖိအားယူနစ်မှ PSF ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
ကြည့်ရှုပါ နောက်ထပ်အကူအညီကိုရယူပါ , လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်ငါ့ကိုဆက်သွယ်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုဖိုရမ်များအပေါ်ပို့စ်တင်နှင့်ထို့ထက် ပို. အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပါ။ ငါ့ကိုသငျသညျအဖွင့်နှင့်အတူရှိခြင်းသို့မဟုတ် PSF file ကိုအသုံးပြုနေသည်ပြဿနာများ၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုသိပါစေငါကူညီပေးဖို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦး ADTS ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
တစ်ဦး EXR ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
တစ်ဦး SRT ဖိုင်မှတ်တမ်းကဘာလဲ?
တစ်ဦး FNA ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
တစ်ဦးက M ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
တစ်ဦး PSB ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
Windows 10 ကိုနှင့်အတူ Lubuntu 16,04 Install လုပ်နည်း
မူလ iPad ကိုမှဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း Apps ကပ
CSS2 နှင့် CSS3 အကြားခြားနားချက်
Android အတွက်အကောင်းဆုံးကင်မရာ Apps ကပ
Minecraft စုပ်တံရှင်းလင်းချက်: နွယ်!
အီးမေးလ်ကနေတဆင့်ပို့ပါရန် Image ကိုအရွယ်အစားကိုချုံ့နေဆဲများအတွက် step-by-အဆင့်ညွှန်ကြားချက်
Volume ကိုကိစ္စများများအတွက် iPhone ပေါ်မှာအသံစစ်ဆေးမှု Enable လုပ်နည်း
အိုင်ပက်အပေါ်တစ်ဦးဓာတ်ပုံ Recover သို့မဟုတ် Undelete လုပ်နည်း
Windows Registry ကို Restore လုပ်နည်း
ဝက်ဘ်ဆိုက်ပုံများများအတွက်ဂရိတ် Alt စာသားရေးသားခြင်း
တစ်ဦး MDW ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
ဇီဝသို့မဟုတ် SVO ပြောင်း၏နည်းပညာ
Miyamoto သာ. ကွီးမွတျရေးသားသူတီထွင်ဖန်တီးဘို့တောင်းဆို
Facebook က Chain အခြေအနေမွမ်းမံမှုများအကြောင်းအမှန်တရား
AOL အတွက်သင့်ရဲ့ Mail ကို Organize မှ Folders ဖန်တီးနည်း
မူလ iPad ကိုတခုတခုအပေါ်မှာ App ကို Quit သို့မဟုတ်ပိတ်ပြီးလုပ်နည်း
ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်တစ်ဦးအိုင်ပက် Fix ဖို့ကိုဘယ်လို
Mfplat.dll တွေ့သည်သို့မဟုတ်လက်လွတ်မအမှား Fix ဖို့ကိုဘယ်လို
IOS ကိုမေးလ်ထဲမှာ Folder ကိုအားလုံးအီးမေးလ်များကိုဖျက်ပစ်ရန်ရန်ကဘယ်လို
ရူးသွပ်မက်စ်: Fury လမ်းမကြီး - Blu-ray disc ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
"သိမ်းဆည်းကြှနျတေျာ့ကို PC ပေါ်တွင်" Backup ကို မှစ. မေးလ်နှင့် AOL မှာ Data Recover